Intsomi yamaAmazons | Ukuhamba kwe-Absolut
Isabella | | Ihlaziywe 11/03/2021 11:02 | EGrisi
Kwingcamango eyaziwayo, amaAmazon ayengamadoda akhaliphileyo nanobukroti ababesilwa ePersi okanye kwiGrisi yakudala bedubula ngehashe labo. Kwakukho amabali amaninzi malunga nabo kwaye abaninzi babezibuza ukuba akukho nyaniso na kuzo.
Ukuba ukhe wazibuza umbuzo ofanayo, kwiposti elandelayo ndiza kuthetha ngentsomi yamaAmazon, ukuba babengoobani, bavelaphi kwaye siyazi ntoni ngabo.
1 Ngoobani amaAmazon?
2 Ngaba amaAmazon ayekhona?
3 Ithini intsomi yamaAmazon?
4 Ngoobani ababenqula amaAmazon?
5 Zeziphi iiAmazon ezidumileyo?
Ibali malunga namaAmazon eze kuthi liyahambelana neentsomi zamaGrike. Ngokutsho kwakhe, amaAmazon ayeligorha lakudala kakhulu elalilawulwa kwaye lenziwa kuphela ngabafazi.
AmaGrike abachaza njengamadoda akhaliphileyo kwaye enomtsalane kodwa ayingozi kakhulu kwaye angamabhinqa alwayo. Bacinga ukuba bahlala kwikoloni ekwanti ikomkhulu labo yayinguThemiscira, ngokukaHerodotus, isixeko esinqatyisiweyo kwindawo eyayiza kuba ngumntla weTurkey.
Ngokwalo mbali, iiAmazon zazinxibelelana namadoda aseScythian kwaye zathandana nawo kodwa zazingafuni ukuvalelwa kubomi basekhaya, ke zenza indawo entsha kumathafa asemaqeleni ase-Eurasia apho aqhubeka khona namasiko ookhokho bawo .
Nangona kunjalo, kukho uhlengahlengiso oluncinci kumabali axeliweyo malunga namaAmazon. Umzekelo, NgokukaStrabo, rhoqo ngonyaka amaAmazon alala nabamelwane abangamadoda ukuze bavelise kwaye baqhubeke nomgca. Ukuba bazala intombazana, umntwana angakhula nabo njengeAmazon enye. Kwelinye icala, ukuba bazala umntwana, babembuyisela emadodeni okanye, kwimeko embi, bamshiya okanye bamncame.
Kubabhali abanjengoPaléfato, iiAmazon azange zibekho kodwa yayingamadoda awayephutha njengabafazi kuba bechebe iindevu zabo.
Ngaba amaAmazon ayekhona?
Ixesha elide, intsomi yamaAmazon yayiyiyo kuphela: ilivo. Nangona kunjalo, ngo-1861 umphengululi weklasiki uJohann Jakob Bachofen wapapasha ithisisi eyakhuthaza ukukrokrelwa ngobukho babo njengoko waqinisekisayo ukuba amaAmazon ayinyani kwaye ubuntu baqala phantsi komtshato
Okwangoku, abaphandi abaliqela bathi intsomi yamaAmazon inokuba nesiseko sokwenyani. Ekupheleni kwekhulu lama-XNUMX, i-necropolis yafunyanwa kufutshane nomda phakathi kweKazakhstan neRashiya, apho kwafunyanwa khona iintsalela zabafazi abangcwatyelwe nezixhobo zabo.
Ukufunyanwa kwentloko yesikhombisi esigotyiweyo emzimbeni wasetyhini ekubonakala ukuba wayefele emfazweni kuyothusa kakhulu. Kananjalo amathambo emilenze egobileyo yentombazana ekwishumi elivisayo eyathetha ngobomi ngehashe.
Uphando olwahlukeneyo olwenziwe lwabonisa ukuba abo bafazi yayingamaScythians, isizwe esasiphila ngokufuduka esasikho iminyaka eliwaka ngokuhambelana nexesha lama-Greek archaic (XNUMXth - XNUMXth century BC).. Ezi ziqwenga ziyavuma: ekufudukeni kwabo abantu baseScythian bafike eTurkey yanamhlanje, apho ngokwasebalini eliyintsomi ngebabeye bathatha inxaxheba kwiMfazwe yeTrojan. Ngapha koko, kukhankanyiwe ukuba iqhawe lamaGrike u-Achilles laline-duel kwi-Trojan War ngokuchasene ne-Penthesilea, intombi yase-Ares yase-Amazon.
Wayebalasele ngezenzo zakhe ezininzi eTroy ngexesha lokungqingwa kwakhe ngaphambi kokuba u-Achilles amoyise ngokuhlaba isifuba sakhe ngomkhonto. Ukumbona esifa, u-Achilles wothuswa bubuhle bakhe wamngcwaba kumanxweme oMlambo iScamander.
Ngaphezulu kwesithathu sabasetyhini baseScythian abafunyenwe kwiindawo ezahlukeneyo zokungcwaba bangcwatywa ngezixhobo zabo kwaye uninzi lwalunamanxeba okulwa, njengamadoda lawo. Oku kubonisa ukuba babenokulwa kunye namadoda kwaye kwezi zikhombisi zifunyenwe isiseko sentsomi yamaAmazon.
Ithini intsomi yamaAmazon?
Intsomi yamaAmazon mhlawumbi kukuzibaxa kwezinto eziyinyani ezenziwe ngababhali-mbali bamaGrike abanjengoHerodotus abafuna ukunika indumasi kubantu abanobukroti. Yonke into ibonakala ibonisa ukuba yayisisibaxo nje samajoni aseScythian, awathi aziwa kwihlabathi lamandulo ngokukwazi kwawo ukudubula ngesaphetha nokulawula ukukhwela amahashe.
Igama elithi amazon livela kwisiGrike "amanzwn" elithetha "abo bangenasifuba." Oku kubhekisa kuqheliso olwenziwe ngamaAmazon kunye namantombazana xa bezalwa, apho ibele lalisikwa ukuze xa bebadala baphathe ngcono isaphetha nomkhonto.
Xa sijonga imisebenzi yobugcisa ekumelwe kuyo amaAmazon, asiziboni zimpawu zolu qheliselo kuba zihlala zivela ngawo omabini amabele nangona kunelungelo eliqhelekileyo eligqunywe. Kumfanekiso oqingqiweyo, amaAmazon ayemelwe elwa namaGrike okanye onzakele emva kwezi ntlanganiso.
Kwelinye icala, amaAmazon kwathiwa aseka izixeko ezininzi kubandakanya i-Efese, iSmirna, iPaphos, neSinope. Kwintsomi yamaGrike ukungena kwezomkhosi kuma-Amazon kuninzi kwaye bamelwe njengeentshaba zamaGrike.
La mabali ahlala ethetha ngemizabalazo phakathi kwamakhosikazi aseAmazon namagorha amaGrike, umzekelo umlo wePenthesilea ngokuchasene no-Achilles kwiMfazwe yaseTrojan okanye idabi likaHercules nxamnye noHippolyta, udade ongaphambili, njengenxalenye yemisebenzi yakhe elishumi elinambini. .
Kukwathiwa ama-Amazon aphuma ku-Ares, uthixo wemfazwe, nakwi-nymph iHarmony.
Ngoobani ababenqula amaAmazon?
Njengoko kulindelwe iiAmazon zazinqula isithixokazi uArtemis hayi uthixo. Wayeyintombi kaZeus noLeto, udade wamawele ka-Apollo kunye nothixokazi wokuzingela, izilwanyana zasendle, ubuntombi, iintombi, ukuzalwa. Ngapha koko, wayenembali yokunciphisa izifo zabafazi. Ngokwamabali, uArtemis wakhokela njengesikhokelo kula magorha angaqhelekanga ngenxa yendlela yawo yokuphila.
AmaAmazon abangelwa kukwakhiwa kwetempile enkulu ka-Artemis, nangona kungekho bungqina bunokuthenjwa boku.
Zeziphi iiAmazon ezidumileyo?
IPentesilea- Ukumkanikazi waseAmazon othathe inxaxheba kwimfazwe yeTrojan ngenkalipho enkulu edabini. Watshabalala ezandleni zika-Achilles no-Antianira wangena esikhundleni sakhe etroneni. Kuthiwa ukuba wasungula umnqwazi.
UAntianira: Kuthiwa wayalela ukwaluswa kwamadoda xa bezalwa kuba abakhubazekileyo benza uthando lube ngcono.
Hippolyta: dade wasePenthesilea. Wayephethe ibhanti lomlingo onamandla amnika ithuba elingaphezulu kwamanye amajoni emfazweni.
IMelanipa: udade waseHipólita. U-Hercules kuthiwa wamthumba kwaye ngenkululeko yakhe wafuna ibhanti lomlingo likaHippolyta.
Otrera: wayethanda uthixo uAres kunye nomama kaHipólita.
UMyrin: Woyisa iAtlantic kunye nomkhosi weGorgons. Wayephethe neLibya.
ITalestria: Indlovukazi yaseAmazon kwaye kuthiwa ilukuhle uAlexander omkhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Intsomi yamaAmazon
Amachibi amakhulu eMelika